NFC: Akaiky akaiky ny serasera sy ny marketing
Ny tontolon'ny finday dia mivoatra hatrany, ary ny mpivarotra ihany no maharaka ny fanovana ary mampiditra azy ireo amin'ny paikadim-pampahafantarana sy fampiroboroboana misy azy ireo dia mety hanana fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny fifaninanana ankehitriny.
Ny teknolojia farany nahabe azy dia ny Near Field Communication (NFC).
Inona no atao hoe Near Field Communication?
Near Field Communication dia teknolojia tafiditra ao amin'ireo fitaovana finday vao haingana izay mamela fifandraisana azo antoka (miaraka amin'ny fanamafisana) eo amin'ny fitaovana finday sy fitaovana fampitana. Ny NFC dia mamela ny mpitsidika handalina lalindalina kokoa, hijery haino aman-jery manan-karena namboarina, hahazo tolotra manokana kendrena, hizara traikefa ary indrindra, mividy, amin'ny alàlan'ny finday avo lenta.
Ny NFC dia fanatsarana lehibe mihoatra ny kaody QR. Ny kaody QR dia mitaky ny fisintomana fampiharana sy ny fampidirana kaody bara hidirana amin'ny atiny izay mihoatra ny pejy web. Ny NFC dia mamela ny mpampiasa finday hiditra amin'ny votoaty manankarena ary hifampiresaka tsy tapaka amin'ny marika. Ny hany mila ataon'ny mpampiasa dia ny manendry ny smartphone amin'ny paositry ny RFID, dokam-barotra amin'ny magazina, fivarotana antsinjarany na zavatra hafa hampiroboroboana, hahazoana fidirana eo noho eo amin'ny tontolon'ny haino aman-jery sy atiny manankarena.
Ho an'ny mpivarotra dia midika izany fa tsy ny fifandraisana fotsiny sy ny fifaneraserana amin'ny mpitsidika tsara kokoa, fa ny fotoana mety hisamborana ny fitondran-tenan'ireo mpitsidika sy ny safidiny amin'ny fotoana tena izy. Ny zava-misy fa ity haitao ity dia mampifangaro ny fampiroboroboana amin'ny toerana amidy, ka mamela ny mpitsidika liana hanao fividianana eo noho eo dia mety hahatonga izany ho masin'ny mpivarotra amin'ny andro ho avy.
Ny teknolojia NFC dia azo ampiasaina amin'ny famaritana, ny tapakila, ny fotoana sy ny fanatrehana, ny tsy fivadihana ary ny fandaharana ho mpikambana, fidirana azo antoka (ara-batana na amin'ny alàlan'ny fitaovana) na fampiasana transit - ankoatry ny fanodinana ny fandoavambola. Tahaka ny fanarahantsika ny làlana sy ny hetsika an-tserasera, ny toerana dia ho afaka hanara-maso ny làlana sy ny hetsika ivelan'ny tranonkala - angamba ny fanomezana isa sy manome valisoa ny fihetsiky ny mpampiasa NFC. Thinaire dia nanolotra ity horonantsary ity izay miresaka amin'ny sasany amin'ireo fomba fanampiny ahafahan'ny orinasa mampiasa izany teknolojia izany:
Google dia efa nanangana ny Google Android miaraka amin'ny fahaizan'ny NFC, ary ny mpilalao finday lehibe rehetra dia efa nanaraka izany na nanambara ny famoahana ny NFC ato ho ato.
Raha manana Google Android afaka NFC ianao dia tsidiho ny Fivarotana Google Android. Raha mpamorona ianao dia navoakan'i Google ity antsipiriany ity horonantsary ao amin'ny NFC fampandrosoana.
Download Akaiky akaiky ny serasera ho an'ny dummies hijerena tsara ny NFC. Jereo:
Ny zavatra tadiavin'ny mpanjifa anio, indrindra ireo an'arivony taona sarotra takarina
Fomba fanamboarana traikefa amin'ny finday maharesy lahatra sy fanentanana amin'ny marketing hitrandrahana fidiram-bola sy tsy fivadihana marika
Ny tranga fampiasana iza no tena mahazo tombony indrindra amin'ny mombamomba ny vokatra nomerika sy ny fonosana maranitra
Ahoana no hanatsarana ny fampiharana tsara ny tsy fivadihan'ny marika sy ny fivezivezena amin'ny varotra finday
Fomba fampiasana ny mety ho fika ampiasain'ny rahona ahafahan'ny marketing ara-nofo izay mahatratra ny mpanjifa vaovao ary mitazona ny fifalian'ny mpanjifa ankehitriny
Ahoana ny fomba hanombohana amin'ny fanentanana omnichannel anao amin'ny alàlan'ny NFC ho teknolojia afovoany
Sintomy ny fifandraisana akaiky eny an-tsaha ho an'ny Dummies
Tags: fidiranampanatrikafandoavam-bola tsy misy volagoogle androidgoogle walletfamantaranaHiditrafanodinana vola amin'ny findayfandoavam-bola amin'ny findayfinday teknolojiafifandraisana akaiky eny an-tsahanfcteboka fivarotanafidirana azo antokasecurityfandoavam-bola smartphonethinaireFanomezana tapakilafotoana sy fanatrehana
Ahoana ny fomba fanoratana lohateny ahafahan'ny mpitsidika mandray anjara